သာလွန်ဇောင်းထက်| January 21, 2013 | Hits:12,018
Ngwe Soe January 21, 2013 - 3:02 pm Why did Thein Sein let go the two ministers then? They were the ones who need to be investigated. Letting the big fishes to slip away and investigated smaller fishes does not make sense to me.
Reply david January 21, 2013 - 3:56 pm ကျွန်တော်ကြားရတဲံ့ သတင်းကတော့ ၀န်ကြီးကိုလည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတဲ့ လိုကြားရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကို လိမ်ညာပြီး လူထုဆီကငွေတွေ မတရားယူဖို.ကြိုးစားနေတဲ့လူတစုသာဖြစ်ပါတယ်။
Reply မြန်မာပြည်သား January 21, 2013 - 4:17 pm စစ်ဆေးရမယ့် သူတွေကော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု နှင့်ကင်းရဲ့လားလို့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။
Reply ohnmar January 22, 2013 - 3:16 pm yes you are right.
Reply bamboo January 21, 2013 - 4:34 pm အဲလိုကိစ္စတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ လူတော်တော်များများသိကြပါတယ်….
Reply အမရာဒေ၀ီ January 21, 2013 - 5:48 pm ကို ဖြိုးဝေအောင် ကောင်းရာ သုဂတိ ရောက်ပါစေ
Reply ဖဖီ January 21, 2013 - 6:06 pm ပုတ်တဲ့လက်ချောင်းကိုလက်မေါင်းမရောက်ခင်ဖြတ်ပစ်တါအကေါင်းဆုံးပါ။
Reply sailay January 21, 2013 - 6:28 pm ဘယ်သူကဘယ်သူ့ ကိုစစ် စစ် အမှန်အတိုင်းဖြစ်၇မယ် ပွင့်လင်းမှု၇ှိ၇မယ် အဖျား၇ှူးမသွား၇ဘူး ဒီလုပ်ကွက်တွေက
Reply တန်ပြန်သူ January 21, 2013 - 7:29 pm ကြိုက်တယ် …
Reply ဌေးဝင်း January 21, 2013 - 7:43 pm ဆက်သွယ်ေ၇းတခုထဲမဟုတ်ပါဘူး…..၀န်ကြီးဌာနတိုင်းပါဘဲ…အဲဒီလိုလိုက်စစ်ဆေးတော့..ဘာတွေ့မှာလဲ..ခိုးတဲ့သူက..ခိုးပါတယ်လို့ပြောပါမလား။..၀န်ကြီးကအစ..ဝေစားမျှစားလုပ်နေကြတာ။
Reply ကိုကို January 21, 2013 - 9:13 pm လာက်ပေးလာက်ယူဖြစ်ပွားမှု့ပေါ်ပေါက်ပါက မည်သူမည်ဝါဟု အလျှော့ပေး ဒဏ်ခက်စရာမလိုပဲကို ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးသင့်ပါတယ် အဘယ်အတွက်ကြောင့်ဆိုသော်လာက်ပေးလာက်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၏အကျင့်ပျက်ချစားမှုက တိုင်းပြည်တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင်ဖော်ဆောင်သူများ တနည်း မှန်ကန်စွာလုပ်ကိုင်မည် လူတန်းစားတွေအတွက်လာက်ပေးလာက်ယ.ူဆောင်ရွက်မှု့က အထက်ဖားအောက်ဖိ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် အလုပ် ကိုလုပ်ကိုင်ခြင်သူ များအတွက် လာက်ပေးကာနေရာယူတက်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်နိုင်ငံတော် တိုးတက်မှု့တွင် ရှေ့ကို(၁၀)ဆလှမ်းတိုင်း နောက်ကို (၁၀)ဆပြန်ရောက်နေတယ် နောက်ပြီး သူများကို ပြောလျှင် ကိုမျက်ချေးကိုပြန်ကြည့်မှ ရမယ်နော် သူများကို(၁)ချောင်းထိုးရင် ကိုယ့်ကို လဲပြန်ထိုးမှ ရှက်စရာဖြစ်နေဦးမယ် လူတွေကခက်တယ် ကိုထက်နှိမ့်တဲ့လူဆိုရင် ထိုးချကြတယ် အကြောင်းသိတွေဖြစ်နေပြန်တော့လည်းလာက်ပေးလာက်ယ.ူသာလုပ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက် ပါက လူရင်းခြင်း ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကို ကြည့်ခြင်ပါတယ်
Reply Nyan Lin Aung January 21, 2013 - 9:20 pm နောက်ထပ်လူတွေကျန်ဦးမယ်
Reply soe naing January 21, 2013 - 10:19 pm နိုင်ငံတော်ကို တကယ်တိုးတက်စေချင်ရင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန့်ပစ်ရမှာဖြစ်တယ်…ယူသူရော ပေးသူကိုပါ ဥပဒေနဲ့အညီ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အရေးယူစေချင်ပါတယ်…
Reply aint aint aung January 21, 2013 - 10:42 pm အရမ်းသတင်းစုံလို့ဖတ်ရတာကောင်းပါတယ်
Reply Maung Mya January 22, 2013 - 1:51 am So who is going to investigate Soe Thein. It is conflict of interest. So he will never be investigated? I heard Soe Thein is the worst as he has so much power dealing businesses in Myanmar. All projects have to go through him.
Reply အောင်ကြီး January 22, 2013 - 2:15 am မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ပြည်သူ့မျက်နှာမကြည့်ဘဲ နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်စားလုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒီဝန်ကြီးရော အရင်ဝန်ကြီးတွေပါ တိုင်းပြည်မျက်နှာမကြည့်တဲ့ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လူစားမျိုးတွေပါ။ အမြန်ဆုံးဖြုတ်ယုံတင်မကဘူး ထိရောက်မြင်သာစွာ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဆိုတာလည်း ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အာဏာရှင်သက်သက်ပါ။ မဟနကို ခပိုက်ဆောင်တပ်လို သဘောထားဖွဲ့စည်းပြီး ဘာသာမဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသိပါတယ်။
Reply pps၁၂၃၄၅ January 22, 2013 - 9:07 am ယခင် စစ် အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ထက်မှာလည်း ပုန်ကန်မည်ဟု ယူဆသော သူများ သို့ အနည်းငယ် ပိုမို မှန်ကန်သောသူများကို ဤကဲ့သို့ စွဲချက်တင် တတ် ကာ အရေးယူလေ့ရှိကြပါသည်။ သို့သော် ထိုအရေးယူမှု တွင် ကုတ်ကုတ်ကုတ် ကုတ် နှင့် မတရား လာဘ် စားတတ်သူများ လွတ်သွားလေ့ရှိပြီး ရောမိရောရာ စားတတ် သူများ ထောင်ကျသွားလေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
Reply Justic4All January 24, 2013 - 6:51 pm ဗျာ…အဲလိုလား မြန်မာပြည်က စကိုင်းနက်ဆိုလား စကိုင်းပျက်ဆိုလား ခရိုနီတစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်း ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုက
Reply khongyi90 January 25, 2013 - 7:25 pm Thaanks alot for the latest news, AYEYARWADY.
Reply အတွင်းသိ January 31, 2013 - 12:29 pm ရတနာပုံတယ်လီပို့ရဲ့CEO ဉီးတင်ဝင်းကျန်သေးတယ်။သူကဝန်ကြီးခန့်တဲ့သူ ဝန်ကြီးနဲ့တစ်ပတ်စဉ်ထဲ တကျိတ်ထဲတစ်ဉာဏ်ထဲ